Imveliso ye-LSR kunye nerabha- iChapman Technology Co, Ltd.
UMenzi weChapman Iyakwazi ukubonelela ngeenkqubo zolawulo lomgangatho ophezulu ngokukodwa ezifunwa lushishino lwezonyango kunye nezixhobo zonyango. UMenzi weChapman Ngaba i-ISO 9001: 2015, i-ISO 13485: i-2016 / i-NS-EN kunye ne-ISO 123485: i-2016 iqinisekisiwe, kwaye siziqhayisa ngelinye lawona manqanaba asezantsi kweziphene kwishishini lethu.
UMenzi weChapmanIgumbi lokucoca i-ISO eliqinisekisiweyo le-ISO eli-8, kunye nodade ococekileyo we-NKS weCandelo lesi-7 kwigumbi lokucoca eSingapore kuthintela ungcoliseko nothuli kunye namanye amasuntswana omoya kwaye ahlangabeze imigangatho ye-ISO eyimfuneko kwimveliso yezempilo.
Njengenye yeenkampani zenaliti yenaliti yenaliti yehlabathi, UMenzi weChapman isebenza kuphela ulwelo abicah yerabha ziphene yokubumba. Sinobuchwephesha bokuvelisa ukubonelela ngeenkonzo ezisusela ekuqhubekeni nasekuveliseni imveliso yamacandelo aphezulu. Silungelelanisa inkqubo yethu yeQA ukuhlangabezana neemfuno zakho ezithile.